Baiboly pejy 698 - Ny Baiboly
Voalohany < 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 Manaraka Farany
1 Piera toko 1 (tohiny)
24Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary ny voninahiny rehetra dia toy ny vonin'ny ahitra: nony maina ny ahitra, dia mihintsana ny voniny; 25fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia maharitra mandrakizay. Ary izany no tenin'ny Evanjely izay notorina taminareo.
1 Piera toko 2
Ny Kristy no fototry ny fahamasinana - Ny fanoherana ny filan-dratsy - Ny fanekena ny lehibe sy ny tompo - Ny fiombonana amin'ny fijalian'ny Kristy.
1Koa esory avokoa ny faharatsiana rehetra, ny fitaka rehetra, ny fihatsarambelatsihy, ny fialonana, ary ny fanaratsiana rehetra; 2maniria fatratra ny rononom-panahy tsy misy famahony, toy ny zaza vao teraka, mba hampitomboany anareo amin'ny famonjena, 3rahefa nandramanareo fa mamy ny Tompo. 4Manatòna azy, izay vato velona nolavin'ny olona ihany tokoa, nefa voafidy sy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra kosa; 5ary hianareo koa dia mirafeta eo amboniny, toy ny vato velona, mba hitsangana ho tempoly fanahy, ho mpisorona masina, ka hanolotra fanati-panahy ankasitrahan'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy. 6Fa izany no ilazan'ny Soratra Masina hoe: Indro aho mametraka vato fehizoro ao Siona, dia vato voafidy sy sarobidy, ary izay mino azy tsy hangaihay. 7Koa voninahitra ho anareo izay mino; fa ho an'izay tsy mino kosa dia: Ny vato nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, 8ary vato mahasolafaka sy vatolampy mahatafintohina; fa tafintohina amin'ny teny izy ireo satria tsy nanaiky, sady izany rahateo no nanendrena azy. 9Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, vahoaka navotana, mba hitorianareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny aizina, ho amin'ny fahazavany mahagaga: 10dia hianareo izay tsy vahoakany akory taloha, fa efa vahoakan'izy Andriamanitra kosa ankehitriny, ary tsy nahazo famindram-po koa taloha, fa efa nahazo ny famindram-pony kosa ankehitriny.
11Ry malala, mamporisika anareo hifady ny fanirian'ny nofo izay manohitra ny fanahy aho, noho ny maha-vahiny sy mpivahiny anareo. 12Manaova fitondran-tena tsara eo afovoan'ny jentily, mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andron'ny famangiana, rahefa hitany ny asa soa ataonareo, na dia amin'ny zavatra anaovany anareo ho mpanao ratsy aza.
13Koa, noho ny Tompo, dia maneke ny lehibe rehetra voatendrin'ny olona: na ny mpanjaka, satria ambony izy, 14na ny mpanapaka, satria nirahiny hamay ny manao ratsy, sy hidera ny manao soa izy. 15Fa izany no sitra-pon'Andriamanitra, mba hanampenanareo ny vavan'ny adala sy tsy mahalala anareo, amin'ny asa soa ataonareo. 16Olona afaka hianareo, nefa aoka ny fahafahana tsy hoenti-manarona ny ratsy, fa manaova toy ny mpanompon'Andriamanitra. 17Hajao ny olona rehetra, tiavo ny rahalahy, matahora an'Andriamanitra, ary omeo voninahitra ny mpanjaka.
18Hianareo mpanompo, maneke ny tomponareo, amin-tahotra sy fanajana lehibe, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-po koa. 19Fa zavatra ankasitrahan'Andriamanitra ny fiaretan'ny olona ny fampahoriana afitsoka azy tsy an-drariny, noho ny fitiavana azy. 20Inona tokoa àry no ho fahamendrehanareo, raha manao ratsy hianareo ka miaritra ny kapoka valin'izany? Fa raha manao soa hianareo no ampahorina, ka miaritra amim-pandeferana, dia izany no ankasitrahan'Andriamanitra. 21Sady izany koa no niantsoana anareo, satria ny Kristy nijaly ho anareo koa, ka namela fianarana ho anareo, mba hanarahanareo ny diany: 22dia izy, ilay tsy nanota akory, na mba niloa-bava hilaza fitaka velively; 23izy ilay notevatevaina, nefa tsy mba nandrahona, fa nanolo-tena tamin'ny mpitsara azy tsy an-drariny; 24izy ilay nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo, mba ho faty isika raha ny amin'ny ota, fa ho velona kosa amin'ny fahamarinana; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitrana anareo. 25Fa efa toy ny ondry nania hianareo, ary indro ankehitriny efa tafaverina amin'ny Mpiandry sy Mpitondra ny fanahinareo.
18Na ny Kristy koa aza, niaritra fahafatesana indray mandeha noho ny otantsika, dia izy marina ho an'ny tsy marina, mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo izy, fa novelomina tamin'ny fanahy. 19Ary tamin'io fanahy io ihany koa no nandehanany nitory teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20dia ireo fanahy tsy nino fahiny, fony niandry ny fahari-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'i Noe, mandritra ny nandrafetana ny sambo fiara, izay nampidirana olona vitsy, dia valo monja, sy namonjena azy ireo tamin'ny rano. 21Ary amin'ny rano ihany koa ankehitriny, dia amin'ny batemy izay tenan'io tandindona io, sy tsy fanadiovana ny loton'ny vatana, fa fangatahana fo tsara amin'Andriamanitra, no amonjena anareo noho ny nitsanganan'i Jesoa-Kristy tamin'ny maty, 22dia ilay nandevona ny fahafatesana mba hahatonga antsika ho mpandova ny fiainana mandrakizay, ary efa lasa any an-danitra, mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra, eken'ny Anjely sy ny fahefana ary ny hery.
1Koa noho ny Kristy efa nijaly tamin'ny nofo ho antsika àry, dia raiso ho fidiana izao hevitra izao: izay nijaly tamin'ny nofo dia nitsahatra tamin'ny ota,
Pejy: Voalohany < 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3006 seconds